क्रिकेटका चार ठूला रेकर्ड जो तोड्न मुस्किल! | | Neplays.com
क्रिकेटका चार ठूला रेकर्ड जो तोड्न मुस्किल!
By Neplays	 Last updated Jan 5, 2020
क्रिकेट विश्वमा धेरै हेरिने खेलमा पर्छ । क्रिकेटका रेकर्डहरु बन्ने र तोडिने सिलसिला जारी नै रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको शुरुआतसँगै विभिन्न रेकर्डहरु बन्दै आएका छन् भने तोडिदै पनि आएका छन् । रेकर्ड तोडिन कै लागि बनेका हुन्छन् । आज हामीले यसअघि बनेका चार रेकर्ड जो तोडिन मुस्किल छ त्यस विषयमा जानकारी दिन्छौं ।
१. टेस्ट क्रिकेटमा ६२४ रनको साझेदारी
२००६ मा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको टेस्ट म्याचमा श्रीलंकाले सर्वाधिक धेरै रनको साझेदारी गरेको थियो । कुमार सांगकार र महेला जयवद्र्धनेको जोडीले तेस्रो विकेटका लागि ६२४ रनको साझेदारी गरेका थिए । यो खेलमा सांगकाराले २८७ रन बनाउँदा जयबद्र्धनेले ३७४ रन बनाएका थिए । अहिलेसम्म यो रेकर्ड तोड्न सकिएको छैन् ।
२. पहिलो ओभरमै ह्याट्रिक
सन् २००६ मा भारतका इरफान पठानले पाकिस्तानविरुद्धको टेस्ट क्रिकेटको पहिलो ओभरमै ह्याट्रिक लिएरु रेकर्ड बनामएका थिए । इफानले पहिले शलमान बटलाई आउट गरे । त्यसपछि युनिस खान आउट भए र मोहम्मद युसुफलाई आउट गर्दै ह्याट्रिक विकेट पुरा गरेका थिए । यो रेकर्ड अहिलेसम्म तोड्न सकिएको छैन ।
भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनी ठूला फिनिसर हुन् । उनले भारतलाई धेरै पटक म्याच पनि जिलताएका छन् । यस्तोमा धोनीको रेकर्ड नै बन्को छ । उनले भारतलाई १७ वटा म्याचमा छक्का प्रहार गर्दै खेल जिताएका छन् । यसमा ९ एक दिवसीय र ८ टी २० छन् ।
४. सुपर ओभर मेडन
सीपीएमा रेड स्टील र गुयना अमेजन वारियर्सबीचको खेलमा यो रेकर्ड बनेको थियो । दुवै टिमले ११८ रन बनाए पछि खेल सुपर ओभरमा गएको थियो । वारियर्सले पहिला ब्याटिङ गर्दै सुपर ओभरमा ११ रन बनायो ।
११ रन बचाउन मैदान उत्रिएको वारियर्सका लागि सुनील नारेनले बलिङ गरेका थिए । तर उनले एक रन पनि नदिदैं मेडन राख्न सफल भए । यो रेकर्ड पनि तोडिन धेरै गाह्रो छ ।